Achromatic Lenses - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 23 Products for Achromatic Lenses)
Realpoo Optics inogona kupa kumucheto kusviba echromatic lens. Achromatic lens inogona kushandiswa sevanyengeri, inotarisa lenzi kana vatambi vechiedza. Izvo zvakagadzirirwa kubvisa chromatic uye idenderedzwa aberrations uye ita mushe kune ese paraxial imaging mabasa. Aya malenzi akafukidzwa nechero dura...
Aachromatic triplet lens ndeyemakemikari lens ine matatu matatu malenzi. Achromatic lens inogona kushandiswa sevanyengeri, inotarisa lenzi kana vatambi vechiedza. Izvo zvakagadzirirwa kubvisa chromatic uye idenderedzwa aberrations uye ita mushe kune ese paraxial imaging mabasa. Aya malenzi akafukidzwa nechero dura...
Muenzaniso Nha.: RP-PMAL
Achromatic Lenses Achromatic Lens Achromatic Lens Tenga Achromatic Lens yekutengesa Achromatic Triplet Lens Achromatic Lens Microscope Achromatic Teresikopu Achromatic Lens Focal Length